ऊ र त्यो !
उसले उस्तै देख्यो–
अन्ततः उस्तै देख्यो
मस्तिष्कका आँखाले पनि – ऊ र त्यो !
ऊ – एउटा मान्छे
त्यो – एउटा पुच्छर !
दिव्य बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रामा राख्यो
जस्ताको तस्तै !
न लाज छोप्थ्यो
न झिँगा भगाउँथ्यो
त्यो पुच्छर !
ऊ जस्तै त्यो
त्यो जस्तै ऊ
हिजो पनि उस्तै
र, भोली पनि सायद उस्तै
कुकुरको त्यो पुच्छर जस्तै
ऊ मान्छे हो
असल मान्छे भन्छ
र, ठान्छ – ममा जीवन जिउने कला छ !
ऊको पर्याय त्यो
त्योको पर्याय ऊ
ऊ हल्लिरहन्छ त्यो पुच्छर जस्तै !
फेब्रुअरी १०, २०११ ।